Amadolobhana amahle eSierra de Madrid: Imvelo nezikhumbuzo | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | 05/01/2022 11:00 | Ezokuvakasha, España
Thola amadolobha amahle eSierra de Madrid kuyoba lula kakhulu kuwe. Ngoba lesi sakhiwo sezintaba sikunikeza amadolobha agcwele ubuhle futhi atholakala ezindaweni ezinhle kakhulu. Itholakala enyakatho-mpumalanga yeMadrid Autonomous Community futhi, nayo, yakhiwe izintaba eziningana, ikakhulukazi lezo IGuadarrama, I-Malagon, U-El Rincón futhi i Cabrera.
Le ndawo ewudedangendlale inezindawo zokulondoloza imvelo njengalena eyakhe Uhla lwezintaba zaseGuadarrama, amadlelo anjengalawa I-Somosierra, izindawo ezimaphakathi nentaba njenge Umfula iLozoya kanye nokuphakama kwamamitha angaphezu kwezinkulungwane ezimbili njenge Peñalara isiqongo noma i I-Cliff ye-Carnations. Futhi, kanye nakho konke lokhu, onakho izindlela zokuhamba izintaba kanye nezindawo zokushushuluza eqhweni ezifana ne-Navacerrada noma i-Valcotos. Kodwa, ngaphezu kwakho konke, amadolobha amaningana agcina yonke i-charm ye emaphandleni nokuthi zingamatshe esikhumbuzo angempela kuwo ngokwawo. Ngaphandle kokuchitha isikhathi, sizophakamisa la madolobha amahle aseSierra de Madrid.
1 IBuitrago del Lozoya
2 I-Rascafría, elinye lamadolobha amahle eSierra de Madrid
3 Ama-Patones avela ngaphezulu
4 IManzanares el Real
6 I-Horcajuelo de la Sierra
7 ILa Hiruela, elinye lamadolobha agcinwe kahle eSierra de Madrid
9 I-Garganta de los Montes
IBuitrago del Lozoya
Siqala uhambo lwethu oluya enyakatho yoMphakathi waseMadrid ukuze sime kuleli dolobha elihle lenkathi ephakathi eliphakathi kwezintaba zeCabrera neRincon. Uzomangala, okokuqala, ngakho indawo ebiyelwe ngodonga kusukela ngekhulu le-XNUMX.
Kakade endaweni, kufanele ubone I-Alcazar, eyakhiwe ngekhulu le-XNUMX ihlanganisa izitayela zeGothic neMudejar, kanye ne Isonto laseSanta Maria del Castillo, enomnyango wayo ohlaba umxhwele we-Gothic. Okunye okuthakazelisayo yi- Ibhuloho lase-Arrabal, eyakhuliswa ngeNkathi Ephakathi.
Futhi, emaphethelweni edolobha kukhona indlu yehlathi, ukwakhiwa kwekhulu le-XNUMX elakhelwe amaDukes of Infantado njengendlu ehlala ngesitayela salezo zomakhi wezakhiwo wase-Italy. Andrea Palladio. Kodwa, mhlawumbe, into emangalisa kakhulu ngeBuitrago del Lozoya iyona Umnyuziyamu wePicasso. Ngokusobala, umcwali wezinwele womdwebi wayengowasedolobheni futhi wanikeza imisebenzi ayemnike yona ukuze enze lo mbukiso. Inamashumi ayisithupha anikezelwe umculi waseMalaga.
I-Rascafría, elinye lamadolobha amahle eSierra de Madrid
Isigodlo saseSanta María del Paular
Futhi esigodini saseLozoya kukhona leli dolobha elingumnyango we Ipaki yemvelo yasePeñalara, enemizila eminingi yezintaba nezintaba. Ngazo, ungafinyelela amachweba adumile aneqhwa nama-moraines awo nama-cirque.
Uma use-villa, sikweluleka ukuthi uvakashele Isonto lesifunda laseSan Andrés Apostol, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX, i- Isibhedlela esidala, ye-XIV, kanye ibhuloho lokuthethelela. Ngalokhu, futhi, uzofinyelela ekubekeni Isigodlo saseSanta María del Paular. Lesi sigodlo sakhiwa ekupheleni kwekhulu le-XNUMX, nakuba siye saba nokubuyiselwa okuningana. Isonto ligqame endaweni eyinkimbinkimbi, kodwa igugu layo elikhulu yilokhu okubizwa I-Cartujana Series kwe-cloister. Kubandakanya imidwebo engamashumi amahlanu nane ye Vincent Carducho, owayephila ngesikhathi sikaVelázquez, emlandweni we-oda lamaCarthusian.
Ekugcineni, kusukela esigodlweni sezindela, umzila wezintaba okuyisa Izimpophoma Purgatory, iqoqo lezimpophoma eziya emfuleni i-Aguilón ezimangalisa ngempela.
Ama-Patones avela ngaphezulu
Ngeke sikutshele ngamadolobha amahle aseSierra de Madrid ngaphandle kokukhuluma ngePatones de Arriba. Ngoba leli dolobha liyitshe lesikhumbuzo ngokwalo. Ngezindlu zayo ze-slate, iyisibonelo esiphelele se izakhiwo ezimnyama zeSierra de Ayllón, okwenze ukuthi imenyezelwe njengeNdawo Yezintshisekelo Zamasiko.
Kodwa i-Patones ikunikeza okuningi ongakubona. Enhle isonto lase san jose Yakhiwa ngekhulu le-XNUMX futhi i-hermitage yeNcasakazi Yomnqumo Isuka ekhulwini le-XNUMX futhi isesitayeleni se-Mudejar Romanesque. Eduze kakhulu kokugcina IPontoon de la Oliva, idamu elakhiwa ezinsukwini zika-Isabell II ukuze linikeze amanzi edolobheni laseMadrid. Futhi nesizinda semivubukulo ye UCastro Dehesa de la Oliva, kusukela ezikhathini zangaphambi kweRoma.
Okokugcina, uma uthanda i-caving, i- Umhume weReguerillo Iwumgodi obaluleke kakhulu kuwo wonke umphakathi waseMadrid. Nokho, okwamanje ivaliwe. Ukuze uyifake, udinga imvume ekhethekile.
IManzanares el Real
ICastillo de los Mendoza eManzanares, enye yezindawo ezinhle kakhulu eSierra de Madrid
Esinye isimangaliso phakathi kwamadolobhana amahle aseSierra de Madrid yiManzanares. Itholakala ogwini lwe I-Santillana reservoir futhi phansi kwe u pedriza, indawo ekahle yokuthi uzilolonge ukuqwala izintaba nokuqwala. Konke lokhu ngaphandle kokukhohlwa I-Snowdrift ye-Countess, lapho kuzalwa khona umfula iManzanares.
Kodwa leli dolobhana futhi linezikhumbuzo ezinhle kakhulu. Uphawu lwayo olukhulu yi- Inqaba yaseMendoza, eyakhiwa ekupheleni kwekhulu le-XNUMX, kodwa esesimweni esihle kakhulu. Ngaphakathi, ungabona iqoqo lama-tapestries kanye nomnyuziyamu mayelana nezinqaba zaseSpain.
Akuyona yodwa uManzanares ayenayo. Ungabona futhi izinsalela ze inqaba endala, okusele izindonga ezimbili kuphela. Ngakolunye uhlangothi, isonto leNkosikazi Yethu Yesiqhwa kulinganiselwa ukuthi yakhiwe ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX nasekuqaleni kwekhulu le-XNUMX. Ihlanganisa izici ze-Romanesque, Gothic kanye ne-Renaissance.
Ekugcineni, endleleni eya La Pedriza, uzothola I-Hermitage ye-Our Lady ye-Peña Sacra, eyakhiwa ngasekupheleni kwekhulu leshumi nesithupha nasekuqaleni kwekhulu leshumi nesikhombisa.
IMeya yasePlaza yaseTorrelaguna
Emagqumeni eSierra de la Cabrera kukhona leli dolobhana, elidume ngokuba yindawo okwazalelwa kuyo UCardinal Cisneros. Impela bakweleta ingxenye enhle yezikhumbuzo uTorrelaguna anazo. Phakathi kwalokhu, okumangalisayo isonto laseLa Magdalena, yesitayela se-Gothic kanye nama-altare e-Baroque ne-Plateresque. Futhi, i I-Abbey ye-Dicalced Franciscan Conceptionist Mothers inendlu yesonto enhle okukhulunywa ngayo UJuan Gil de Hontañón kanye ne-Renaissance mausoleum.
Ungavakashela futhi iTorrelaguna la IHermitage ka-Our Lady of Solitude, kusukela ekhulwini leshumi nane, nakuba ibuyiselwe ekhulwini leshumi nesishiyagalombili. Igcina isithombe sikasanta wedolobha.
Mayelana nezakhiwo zomphakathi, i Iholide laseDolobheni, kusukela ngo-1515 kanye nezinsalela zodonga lwenkathi ephakathi, lapho i Umnyango kaKristu waseBurgos. Kodwa isikhumbuzo esikhulu sedolobha yi- i-salinas Palace, i-Renaissance jewel nayo ebizwa ngokuthi i-Gil de Hontañón.
I-Horcajuelo de la Sierra
Ukubonisa imiphumela ye-"Horcajuelo de la Sierra"
Leli dolobhana elincane e-Sierra de Madrid liphinde livelele ngezakhiwo zalo zendabuko, esimweni salo samatshe amnyama. Ngaphezu kwalokho, iyindawo ebalulekile yokuvakasha kuyona Isonto laseSan Nicolás de Bari, ne-façade yase-Mudejar, indawo yobhapathizo yangenkathi ephakathi kanye ne-altare layo le-Baroque.
Ngokufanayo, uzomangala edolobheni elincane kangaka ngokuba khona kwe imnyuziyamu ye-ethnographic. Kodwa ine-forge ebuyiselwe ngokuphelele kanye nehhashi elifaka izicathulo. Ekugcineni, endaweni ezungezile yedolobha kukhona I-Hermitage ye-Our Lady of Sorrows.
ILa Hiruela, elinye lamadolobha agcinwe kahle eSierra de Madrid
Izakhiwo zendabuko eLa Hiruela
Naphezu kwesibalo sabantu abambalwa, leli dolobhana lingelinye lalawo alilondoloze kangcono izakhiwo zendabuko, nezindlu zakhona zamatshe nezensimu. Kuyafaneleka futhi ukuvakashela ababuyiselwe Isigayo sikafulawa, ukwakhiwa kwe Iholide laseDolobheni futhi i izindlu zomphristi kanye lomfundisi.
Kodwa more curious is the indawo yezinyosi eziseduze, ukwakhiwa okungokwesiko okwakuhloselwe ukutholwa koju futhi okwakusekelwe ezingodweni ze-oki ezingenalutho ezazibekwe ezitsheni futhi zimbozwe ngokhokho noma ngokhuni. Ngaphezu kwalokho, izindlela ezinhle zokuhamba izintaba ziqala ukusuka eLa Hiruela ezizokuthatha, ngokwesibonelo, zikuyise endaweni ebabazekayo. I-Hayedo de Montejo.
Itholakala empumalanga, eduze nesifundazwe sase-Guadalajara, i-El Berrueco inendawo ezungezile enomona. I I-Cabrera massif kanye nokubeka amandla I-El Atazar reservoir, lapho ungazilolongela khona imidlalo yasemanzini njengokuhamba ngomkhumbi.
Leli dolobhana elinabantu abacishe babe ngamakhulu ayisishiyagalombili nalo linokuningi ongakunikeza lona. Phakathi kwezikhumbuzo zayo, i- isonto laseSanto Tomás Apostol, ne-Romanesque Mudejar façade, futhi, kakade emaphethelweni, i- umlindo wamaSulumane, umbhoshongo owakhiwe ngensengetsha.
Kepha, mhlawumbe, into emangalisa kakhulu nge-El Berrueco iyona Museum of Water and Hydrographic Heritage enikezelwe kwingqalasizinda eminingi ye-hydraulic yaseSierra de Madrid. Ngaphezu kwalokho, akuyena yedwa edolobheni. Iphinde ibe nenye ezinikele emsebenzini wamatshe wendabuko wendawo.
I-Garganta de los Montes
Isonto lePilar eGarganta de los Montes
Sizoqeda ukuvakasha kwethu kwamadolobhana amahle aseSierra de Madrid amisa eGarganta de los Montes, etholakala esigodini saseLozoya. Ungayeki ukubuka zabo izindlu zezintaba zendabuko yobude. Akhiwe ngamatshe ahlanganiswe nodaka namatshe futhi agcina ngoshimula omise okwensimbi.
Kodwa kufanele futhi ubone izikhumbuzo ezifana amasonto aseSantiago Apóstol naseNuestra Señora del Pilar, lo I-Hermitage ye-Our Lady of the Meadows namahhashi okugqokiswa izicathulo. Futhi, ungayeki ukusondela observation umbhoshongo, lapho uzothola khona imibono emangalisayo yesigodi saseLozoya.
Kodwa-ke, into ebaluleke kakhulu ngeGarganta de los Montes izithombe ezisatshalaliswa emigwaqweni yawo futhi lokho kumelela izigcawu zempilo yansuku zonke yedolobha. Phakathi kwabo, ekamkhulu nomzukulu baxoxa ngokuhlangenwe nakho, okwe-altare noma okomuntu wendawo obuka isigodi.
Sengiphetha, sixoxile nawe mayelana amadolobha amahle eSierra de Madrid. Zonke zikufanele ukuvakashelwa nguwe. Kodwa zikhona ezinye eziyigugu ngendlela efanayo. Ngokwesibonelo, I-Puebla de la Sierra, esalondoloza umthombo wama-Arabhu; I-Soto del Real, nesonto layo le-baroque le-Immaculate Conception kanye nebhuloho layo lamaRoma; IGuadarrama, ne-Plaza Mayor yayo evamile, noma UCercedilla, nesonto layo laseSan Sebastián. Qhubeka futhi wazi lawa madolobha futhi ujabulele ukuzizwisa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » España » Amadolobha amahle eSierra de Madrid